Iyo 13 Inonyanya Kuzivikanwa B2B Yemukati Yekushambadzira Tactics | Martech Zone
Ichi chaive chinonakidza infographic chandaida kugovana kubva Wolfgang Jaegel. Kwete nekuda kwekuti zvinopa ruzivo rwekuti ndeapi marongero ekushambadzira ari kuendeswa nevatengesi veB2B, asi nekuda kwegap yandinoona mune zvirimo zvirikuendeswa maringe nezvinokanganisa marongero iwayo. Mukurumbira wekuzivikanwa, rondedzero iyi ndeyenhau midhiya, zvinyorwa pawebhusaiti yako, zvinyorwa, mablog, zviitiko zve-zvemunhu, nyaya dzenyaya, mavhidhiyo, zvinyorwa pane mamwe mawebhusaiti, mapepa evachena, uye mharidzo dzepamhepo.
87% yevatengi veB2B vanoti zvemukati zvine chekuita nesarudzo yevender.
Mukufunga kwangu, pasina humbowo, ndinofunga kuti vatengesi veB2B vanogona kunge vari kurasikirwa. Ndichiri kubvuma kuti matsamba enhau uye zvinowanzoenderana nezvakanaka pane yako saiti semablog uye zvinyorwa zvinobatsira kukwezva traffic, iyo mukana wekusave nemataurirwo, mapepa evachena uye mavhidhiyo zvinoita kunge zvinopesana nemaitiro eazvino eB2B. Mushure mezvose, kungowana vashanyi kudzokera kuwebsite yako chinetso chimwe chete… asi chikuru ndechekuti vatendeuke vachiri panzvimbo iyi. Vatengi vedu vaona zvisingaite mhedzisiro kubva kumharidzo dzakatumirwa kuburikidza nevezvenhau vezvenhau, whitepapers kuseri peji rekunyoresa, uye nyaya dzenyaya dzekupa mukutenga sarudzo sarudzo. Zvinotaridza kwandiri kuti munhu wese arikushanda padanho rekutora asi kwete rwekutendeuka kweiyo equation pano!
Tags: article marketingnyayab2bb2b kushambadziravanyoraZvidzidzo zvemhosvayakawana midhiyazviitikoKushambadzira MisanganoAngasweramharidzo dzepamhepovanobhadharwa midhiyamharidzoTsvaga Kutengesaevanhu vezvenhauSocial Media Marketingvhidhiyo kushambadziramavhidhiyo